PSJTV | शीतलनिवासबाट सिंहदरबार पुग्न ५ दिन!
काठमाडौं उपत्यकाभित्र, त्यो पनि ५ दशमलब २ किलोमिटर मात्रको दूरी! राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगन्जदेखि संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारसम्मको यो दूरीमा आउन गुगल म्यापले १७ मिनेट लाग्ने देखाउँछ।
सुन्दा अचम्म लाग्छ, यति छोटो दूरीमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगन्जदेखि संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारसम्म पत्र पुग्न ५ दिन लागेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र पाँच दिनपछि मात्र प्राप्त भएको सुन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणको विषयमा संसद्लाई कुनै जानकारी नै नदिएको पनि सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणमा गएको पाँचौं दिनमा बुधबार मात्रै संसद्लाई भ्रमणको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीले गत २४ जेठमा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को शतवार्षिकीमा सहभागी हुन २५ जेठमा त्यसतर्फ जाने भएकाले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोक्नुभएको’ भन्ने पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएका थिए।
काठमाडौं: नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि तिब्र दमनको नीति अख्तियार गरेको भन्दै त्यसको शसक्त प्रतिकार गर्ने जनाएको छ । आज सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ...
ट्युनिस: भूमध्य सागरको ट्युनिसियातर्फको बन्दरगाह क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना हुदाँ कम्तीमा ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोगले दुर्घटनामा परेका मध्ये चार जनाको मात्रै शव भेटिएको र अन्यको खोजी ...